Gịnị Bụ A Jailbreak On An iPhone na M Kwesịrị Onerụ Otu? Nke a bụ ihe ị kwesịrị ịma. - Iphone
kedu ihe ihuenyo m anaghị atụgharị
iphone 6s mmebi mmebi mmiri
iphone mic anaghị arụ ọrụ n'oge oku
Gịnị Bụ A Jailbreak On An iPhone na M Kwesịrị Onerụ Otu? Nke a bụ ihe I Kwesịrị Knowmara.
You na-atụle jailbreaking gị iPhone na ị chọrọ ịmụtakwu. Jailbreaking iPhone nwere ike ịdị ize ndụ ma na-abụkarị uru adịghị akarị nsonaazụ ndị ọ nwere. N'isiokwu a, m ga-agwa gị ihe ọ pụtara ịrụ jailbreak na iPhone ma na-akọwa gịnị mere na ikekwe i kwesịghị ime ya.
Gịnị Ka Ọ Pụtara Iji Jailbreak An iPhone?
N’okwu ndị dị mfe, a jailbreak bụ mgbe mmadụ gbanwere iPhone ha iji wepụ ihe mgbochi etinyere n'ime iOS, sistemụ arụmọrụ nke na-agba na iPads, iPods, na iPhones. Okwu a bụ 'jailbreak' sitere n'echiche bụ na onye ọrụ iPhone na-apụ na 'nga' nke ihe mgbochi ndị Apple manyere ha.
mgbe ị rọrọ nrọ ịtụrụ ime
M Kwesịrị Jailbreak My iPhone?
N'ikpeazụ, gị nwere ikpebi ma á »‹ ga-jailbreak gá »‹ iPhone. Agbanyeghị, achọrọ m ka agwa gị uru na nsonaazụ ya ma ọ bụrụ na ị kpebie ịgafe ya. Ọ bụrụ na ị bụghị ọkachamara, ana m akwado ka ị bụrụ emela jailbreak gị iPhone n'ihi na ramifications nke ime otú ahụ nwere ike ịbụ oke ọnụ.
Uru nke Jailbreaking An iPhone
Dị ka m kwuru na mbụ, mgbe ị na-eme a jailbreak, gị iPhone agakwaghị agbụ na mgbochi nke iOS. ’Ll ga-enwe ike ibudata ọtụtụ ngwa ọhụrụ sitere na ụlọ ahịa ngwa ọzọ a maara dị ka Cydia. Ọtụtụ n'ime ngwa ndị ị nwere ike ibudata na Cydia na-enye gị ohere ịhazi iPhone gị n'ụzọ ga - ekwe omume naanị na jailbroken iPhone.
Ngwa Cydia nwere ike ịgbanwe akara ngosi gị, gbanwee font gị, kpochie ngwa gị, ma gbanwee ihe nchọgharị weebụ gị na Chrome ma ọ bụ Firefox. Ọ bụ ezie na ngwa ndị a nwere ike ịdị jụụ ma nwee ike ịgbakwunye ntakịrị arụmọrụ na iPhone gị, ha nwekwara ike ịbụ ukwu dị ize ndụ. Imirikiti mmachi ndị Apple na-ewunye n'ime iOS dị iji kpuchido gị na data gị site na ndị na - agba ọsọ - ọ bụghị naanị igbochi ihe ị nwere ike ime.
O doro anya na, Apple na-elebara Jailbreak Community anya
Oge ọ bụla Apple wepụtara nsụgharị ọhụrụ nke iOS, ọ bụ ihe ịtụnanya: Atụmatụ ndị dị na mbụ site na jailbreaking iPhone bụ ugbu a wuru na ka sistemụ iPhone. Apple na-eleba anya n'ihe ndị obodo jailbreak na-eme ma na-eme atụmatụ atụmatụ jailbroken ama ama n'ime ụdị iPhone ọhụrụ. Lee ụfọdụ ihe atụ:
Igwe ọkụ iPhone
Otu ihe atụ nke Apple na-ewere ngwa Cydia a ma ama ma jikọta ya na iPhone mgbe niile bụ tọọchị na Center Center. Ndị ọrụ iPhone na-achọ ngwa ọkụ tọọchị iji mee ka ọkụ dị na azụ nke iPhone ha, bụ ndị na-enweghị koodu nzuzo, batrị batrị, juputara na mgbasa ozi.
Na nzaghachi, obodo ndị na-eme mkpọtụ na-achọta ụzọ iji mee ka ọ dịkwuo mfe ịgbanye ọkụ na azụ nke iPhone site na ijikọta ya na menu ndenye.
Apple hụrụ ewu ewu ọkụ ọkụ nwere ike ịnweta, n'ihi ya, ha webatara ya na Control Center mgbe ha wepụtara iOS 7.
Ihe atụ ọzọ nke Apple na-emegharị ngwa Cydia a ma ama n'ime njirimara iPhone bụ mgbe ha webatara Apple Night Mgbanwe na iOS 9.3. Apple Night Shift na-eji elekere nke iPhone gị gbanye agba na ngosipụta na-akpachapụ anya na-acha anụnụ anụnụ, nke egosiri na ọ ga-esiri ya ike ihi ụra n'abalị.
Tupu iOS 9.3, naanị otu ụzọ iji dozie agba agba iji wepu ọkụ na-acha anụnụ anụnụ bụ iji wepu iPhone gị ma wụnye ngwa a na-akpọ Auxo .
Ndụmọdụ: can nwere ike gbanye Mgbanwe Night site na ịga Ntọala -> Ngosipụta & Ìhè -> Mgbanwe abalị na ịme ọpịpị ka ịgbanwee n'akụkụ nke ọ bụla Ndokwa ma ọ bụ Iji aka kwado ruo echi.
Jailbreaks Baghịzi Oge
Site na mmelite ọ bụla dị na iOS, enwere uru ole ma ole na ịrụ ọrụ jailbreak na iPhone. Apple na-emetụ aka na ndị ahịa ya ma na-ewerekarị ihe ndị kachasị ewu ewu n'etiti ndị na-eme mkpọtụ ma tinye ha n'ime iPhone na a nchekwa ụzọ.
iphone agaghị akụ mgbe akpọchiri
Ọghọm nke Jailbreaking Otu iPhone
Akpa, ị kwesịrị ịmara na mgbe ị na-eme a jailbreak na iPhone, na akwụkwọ ikike maka iPhone abaghị uru. Otu Apple Tech agaghị enyere gị aka idozi jailbreak na-ezighi ezi. Iji mara mma, DFU Weghachi nwere ike iwepụ jailbreak na iPhone gị, mana nke ahụ abụghị mgbe niile ndozi nchekwa.
Metụtara nke Jailbreak ka dị
Kpụrụ Apple tech David Payette gwara m na Apple nwere ụzọ nke mara ma ihe iPhone mgbe jailbroken, ọbụna mgbe ị na-eme a DFU weghachi. Mụ na otu nwanyị nwa nwa ya jidere ya iPhone 3GS. Ọ bụ ezie na o nwere DFU weghachiri ekwentị ya na mbụ ọnọdụ, ihe iOS update bricked niile ụdị nke na ekwentị na mgbe a jailbroken. M DFU weghachiri iPhone ya ọzọ na ụlọ ahịa, mana ọ gaghị arụ ọrụ.
('Bricking' bụ okwu nke jailbreaker maka ihe na-eme mgbe iPhone agaghị agbanye. Gụọ isiokwu m banyere otu esi edozi iPhone bricked ịmụtakwu ihe.)
Mgbe m gwara ndị njikwa, a gwara m na agbanyeghị otu apụl mmelite ahụ ejirila iPhone ya kpuchie, ọ gaghị ekpuchi ya n'okpuru akwụkwọ ikike n'ihi na ekwentị etinyela aka na mbụ. Jailbreaking nwere ike ịnwe ogologo oge na akwụkwọ ikike gị, yana na akpa gị - ya mere kpachara anya.
Isi ihe ọzọ mere m ji akwado gị ka ị ghara ịgbanye iPhone gị bụ na a ga-ekpughe gị na ọtụtụ ngwa ọjọọ na malware. Malware bụ sọftụwia emere iji mee ụma mebie sistemụ arụmọrụ nke iPhone gị. Storelọ Ahịa Ngwa nwere ụkpụrụ dị elu maka ngwa na nchedo nke na-echebe iPhone gị na malware na nje.
Ihe kpatara Apple ji etinye ngwa ọ bụla n'ime ihe ha kpọrọ 'sandbox' bụ ka ngwa ọ bụla nwee ohere zuru oke na iPhone gị fọdụrụ.
Mgbe ị na-ebudata ngwa site na Storelọ Ahịa App nke kwesịrị ịnweta n'akụkụ ndị ọzọ nke iPhone gị, a ga-akpali gị ozi dị ka “Ngwa a ga-amasị gị ịnweta kọntaktị gị” yabụ ị nwere ike ịnwe ohere ịhọrọ ma ọ bụ ịgọnahụ ohere ịnweta ozi nkeonwe gị. Ọ bụrụ n ’iti OK, ngwa ahụ enweghị ike ịnweta ozi ahụ.
na -arọ nrọ ududo na -efegharị na gị
Jailbreaking na-ewepu mgbochi ndị a, ya mere, ngwa sitere na Cydia (ụdị nke jailbreaker nke Storelọ Ahịa App) nwere ike ọ gaghị akpali gị ozi a ma zuo ozi gị na-enweghị ikike gị.
Ngwa Jailbroken nwere ike idekọ oku ekwentị gị, nweta kọntaktị gị, ma ọ bụ zipu foto gị na sava dị anya. Ya mere, mgbe Cydia ga-enye gị ohere ịnweta ọtụtụ ngwa ndị ọzọ, ọtụtụ n'ime ha dị njọ ma nwee ike ịkwụsị ọtụtụ nsogbu na iPhone gị.
Mmelite ngwanrọ agaghị arụ ọrụ
N'ikpeazụ, ọ bụrụ na ị nwere jailbroken iPhone, ị ga-abanye n'ime nsogbu oge ọ bụla Apple mmelite iOS. Maka mmelite ọ bụla nke iOS, enwere mmelite jailbreak kwekọrọ. Mmelite jailbreak ndị a nwere ike were izu ma ọ bụ ọnwa iji jide iOS mmelite, nke na-ahapụ iPhone gị yana sistemụ ochie.
Ọ Bụ Iwu Iji Jailbreak My iPhone?
Iwu nke ime jailbreak na iPhone bụ ntakịrị ebe isi awọ. Teknụzụ, ọ bụghị iwu na-akwadoghị ka jailbreak gị iPhone, ma Apple na-akụda mmụọ ike iPhone ọrụ si eme otú ahụ. Ọzọkwa, jailbreaking gị iPhone bụ imebi nke usoro nke onye ọrụ nkwekọrịta ị kwetara iji jiri iPhone. Dị ka m kwuru na mbido, nke a pụtara na onye ọrụ Apple nwere ike ọ gaghị edozi iPhone nke abụrụla jailbroken.
Otú ọ dị, ụfọdụ n'ime ngwa ị nwere ike ibudata site na Cydia na-enyere gị aka ime ihe iwu na-akwadoghị na iPhone gị. Nke a gụnyere ngwa ndị ga-eme ka ị zuo egwu, ihe nkiri, ma ọ bụ mgbasa ozi ọzọ. Ya mere, ọ bụrụ na ị na-ekpebi jailbreak gị iPhone, kpachara anya banyere nke Cydia ngwa ibudata. Ngwa ezighi ezi nwere ike tinye gị na nsogbu iwu!
Omume Nke Akụkọ
O gwụla ma ịnwere iPhone echekwabara igwu gburugburu, egbula iPhone gị. Mgbe ị na-eme jailbreak na iPhone, ị na-agbakwunye obere ọrụ na ihe ize ndụ nke imebi iPhone gị dị oke - obere akpa gị. Daalụ maka iwepụta oge iji gụọ akụkọ a, anyị nwere olile anya na ị ga-eso ndị enyi na ezinụlọ gị kerịta ya na soshal midia!